Mpanamboatra sy orinasa hafa tsara indrindra | Media
MEDO andiany hafa
Adala amin'ny korontana amin'ireo karazan'entana kely ao an-trano?
Sari-tratra, latabatra, seza, boky, kabinetra, latabatra an-daniny, kabinetra amin'ny lafiny iray: vahaolana tsara daholo, hanomezana tahiry fanampiny ho an'ny habakao.
Ny fanaka MEDO dia manampy fomba tsy manam-paharoa ao an-tranonao ary mahazo toerana bebe kokoa hitahirizana ny entanao. Izy io dia singa fanaka ilaina raha te-hanolotra fonosana fanaka feno ho an'ny mpanjifanao ianao. Afa-tsy ny fitahirizana asa, manolotra ihany koa izahay izay ampidirina ao anaty set mba hampiasaina azo ampiharina.
Kabinetra amin'ny lafiny / Kabinetra misy divay
Kabinetra divay MEDO dia endriny miavaka. Mahasarika ny maso ary atambatra amin'ny fomba sinoa sy ny fomba tandrefana. Izy io dia mandray loko mamatonalina, izay iray amin'ireo loko lamaody vaovao eo amin'ireo marika avo lenta. Ambonin'izany, mifanaraka tanteraka amin'ny ankamaroan'ny endrika anatiny izy io. Ary mifidy haingon-tsoratry ny tsivalana tsotra mahazatra sy tongotra vy avo lenta izy, izay mahatonga ny kabinetra manontolo ho kanto sy tsara tarehy kokoa.
Latabatra kafe boribory kely misy hoditry ny lasely
Ny latabatra boribory hoditra saddle premium dia iray amin'ireo fivarotana kafe kely boribory tsara indrindra miaraka amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa. Misongadina eo amin'ny tsena ny famolavolana ny firafiny sy ny fampifangaroana fitaovana sy loko isan-karazany. Izy io dia mitondra vokatra mampitambatra amin'ny habakao.
Fofona mahafatifaty boribory mahafatifaty re izany! Na mivarotra na tsia ny vokatra dia miankina amin'ny famolavolana sy ny haben'ny vokatra ihany. Ny mazava-maitso ivelany dia manome fahatsapana lohataona sy vaovao. Isaky ny mitsidika ny namanao dia ho hitan'ny masony avy hatrany ny paompy kely miloko. Mipetraka eo amboniny amin'ny tany ny tongony, ny faritra rehetra amin'ny vatana dia milamina.
Fiorenana amin'ny alina marbra ambony
Round Marble Top Night Stand dia endrika tsotra nefa kanto. Izy io dia manana fototra mainty toradroa, ary ny tampony dia natsofoka tamina vato voadio. Vato voadio miaraka amina marbra fotsy, izay mifanohitra tanteraka amin'ny loko mainty ifotony. Ilay vato voapaika dia mora tazomina ihany koa amin'ny fampiasana isan'andro. Ny tongotra mafy hazo dia afaka mifanaraka tsara amin'ny gorodona hazo.
Bokin-koditra vita amin'ny lasely vy
Ny rakotra fanaovam-panazavana premium, fonosana vita amin'ny vy titanium vita amin'ny vy dia ny endriny farany. Ampitahaina amin'ny valizy na talantalana hafa izy io. Ny takelaka boky iray manontolo dia nampiasa vy tsy misy fangarony ho fitaovana fototra ary ampiarahina amin'ny kojakoja avo lenta. Miaraka amin'ny talantalana 5, manome toerana malalaka ho an'ny boky izy io izay mahasoa azy amin'ny fiainanao.
Kabinetra enina sosona
Miaraka amin'ny hoditra milomano miaraka amina veneer-n'ny kennandy nafarana, ny kabinetra enina sosona MEDO dia endrika mahazatra izay tsara ho an'ny efitrano fisakafoana, ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitrano fandraisam-bahiny, izay tsara sy azo ampiharina. Ny habe sahaza azy, ny endrika maodely fohy, ary koa ny fitehirizana entana lehibe dia tena ilaina amin'ny tranonao.
Birao vita amin'ny lasely ambony kalitao ambony
Tsotra sy malama ny famolavolana izay maro karazana amin'ny fomba sy habaka maro. Manolotra fijery faran'izay minimalista izy io. Ny fotony dia tonga amin'ny fantsom-by vy. Na dia manify aza izy io, dia matanjaka amin'ny kalitaon'ny vy tsara.
Birao vita amin'ny famakiana vita amin'ny hoditra vita amin'ny hazo
Hodi-boasary volomboasary, tampon-kazo setroka, firafitra vy avo lenta, varahina borosy miaraka amin'ny hevitra famolavolana minimalista. Izy io dia misy sarisary 2 ary miaraka amina famolavolana fohy, maoderina, kanto ary azo ampiharina, izay mety amin'ny endriny samihafa amin'ny endrika anatiny.
Fitaovana maoderina vita amin'ny fanaka vita amin'ny vy
Stainless Steel Bookself 1900 * 430 * 2000mm
Fitaovana: hoditra saddle premium, nopetahany takela-by vy
Faritra ambany Tongotra vy
Fanaka maoderina enina fanaka ankehitriny
Kabinetra rihana enina 600 * 400 * 1200mm
Fitaovana: Premium PVC, mpanafatra vendrana walnunt
Faritra ambany Tongotra hazo + hoditra milomano
Birao Solosaina Modern fanaka
Biraon'ny solosaina 1500 * 600 * 750mm
Fitaovana: Vita vita amin'ny volomboasary, tampon'ny latabatra setroka, endriny misy ny fitaovana, varahina borosy
Mijoro amin'ny alina amin'ny fanaka maoderina
Birao 595 * 410 * 590mm
Fitaovana: MDF mifoka veneer + frame vy vy vy titanium + vatasarihana buffer
Birao fanaka maoderina
Birao 1200 * 600 * 750mm
Fitaovana: Steel, hoditra lasely premium ， veneer mpanafatra walnunt
Kabinetra misy divay ankehitriny
Diviziona divay 1200 * 400 * 1360mm
Toeram-pandriana maoderina maoderina
Sehatra boribory 60mm
Fitaovana: Lamba sy spaonjy mahazaka avo
Latabatra kafe misy fanaka maoderina
Latabatra kafe Ø800 * 300mm Ø500 * 490mm
Fitaovana: Hoditra lasely premium
Faritra ambany Tongotry ny lasely hazo
Teo aloha: Kabinetra